राराको अस्पष्ट सन्देश | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय राराको अस्पष्ट सन्देश
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारा तालबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय अङ्गको महत्त्वपूर्ण अङ्ग निजीक्षेत्रलाई लगानी र नाफामा समेत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने बताएका छन् । वामपन्थी सरकारसँग निजीक्षेत्र सशङ्कित रहेको अवस्थामा उनले यसरी निजीक्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, यसअघि वर्तमान सरकारबाट आएका सन्देशहरूमा सरकारको ठोस कार्यनीति भने स्पष्ट पारेका छैनन् । र, त्यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता अझै सशङ्कित छन् ।
पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कर्णाली पर्यटन वर्ष मनाउन उनी त्यहाँ पुगेकै दिन रारा तालमा १६ हजारभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक पुगे । यसबाट त्यहाँको प्रदेश सरकार सन्तुष्ट भएको हुन सक्छ । तर, यसरी पर्यटकको घुइँचो बढाउनेमात्र रणनीति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । पर्यटक बढाउने ध्याउन्नमा सगरमाथा आरोहणको शुल्क कम गरिनु हुन्न । त्यस्तै रारा तालको कुमारी सौन्दर्यमा भीडभाड जम्मा पार्नु हुन्न । त्यसको मौलिकता संरक्षण गरी महँगो पर्यटकीय स्थल बनाइनुपर्छ । मुस्ताङ, डोल्पा र अन्य विशेष पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि यसैअनुसार जोकोही जान नपाउने, महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने विशेष क्षेत्र बनाइनुपर्छ । सस्तोमा पर्यटन सेवा दिनु भनेको गाईको दूध दुहुन खोज्दा लोभले रगतै निकालेर लिनुजस्तै हो । स्वीट्जरल्याण्डमा केही पर्यटकीय स्थलमा सीमित सङ्ख्याका होटलमात्र खोल्न दिइएको छ र त्यहाँ रात बिताउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि तोकिएको छ । निर्धारितभन्दा बढी पर्यटकलाई प्रवेशमार्गमा नै रोकिन्छ । त्यसैले हामीले त्यहाँको पर्यटन नीतिलाई पनि मनन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो पर्यटन विशेष भएर नै चलेको हो । भौतिक पूर्वाधार नाम मात्रको भएर पनि हामीकहाँ वार्षिक पर्यटक १० लाखको हाराहारीमा पुग्नु यही अद्वितीय मौलिकता कारण हो । जस्तोसुकै पर्यटकलाई आउन दिँदा केही न केही लाभ लिन सकिन्छ । तर, तिनले निम्त्याउने विकृतिका तुलानामा त्यो लाभ थोरै हुन सक्छ ।
लगानीको सुरक्षा गर्ने प्रत्याभूति त ठीकै हो । तर, नाफा नै सुरक्षित गर्ने हदसम्म प्रत्याभूति दिनु भनेको सरकार अत्तालिएको सङ्केत हो । व्यवसायमा नाफा कुशलताबाट कमाउने हो, सरकारी प्रत्याभूतिबाट होइन ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनबाट उनी निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता वर्तमान वामगठबन्धनको सरकारसँग सशङ्कित छन् भन्ने स्वीकारेको स्पष्ट हुन्छ । त्यही भएर उनले निजीक्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न लगानी र नाफाको सुरक्षा गरिने बताए । लगानीको सुरक्षा गर्ने प्रत्याभूति त ठीकै हो । तर, नाफा नै सुरक्षित गर्ने हदसम्म प्रत्याभूति दिनु भनेको सरकार अत्तालिएको सङ्केत हो । व्यवसायमा नाफा कुशलताबाट कमाउने हो, सरकारी प्रत्याभूतिबाट होइन । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाबारे आश्वस्त पार्न खोज्नुसम्म त ठीकै हो तर यो भाषणबाट नभई निर्णय, ऐनकानूनको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनबाट हुनुपर्छ । अहिले उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ तर लगानीकर्ता अन्योलमा छन् । यस्तोमा स्पष्ट नीतिगत निर्देशन एवम् कानूनी परिवर्तन गरिनुपथ्र्यो । त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्थ्यो र आश्वस्त पनि हुन्थे । सरकार बजेट वक्तव्यबाट व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने सोचमा देखिन्छ । तर, त्यसका लागि बजेट कुरिरहनु आवश्यक छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जुन श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे त्यसबाट पनि लगानीकर्ता अन्योलमा छन् । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीले नाफाको समेत ग्यारेण्टी दिने बताएका हुन सक्छन् । संसारभरि कहीँ पनि सरकारले नाफाको ग्यारेण्टी गर्दैन । ग्यारेण्टी गर्ने हो भने त व्यवसाय नै भएन किनभने व्यवसायीहरू जोखीम लिएर नै नयाँ व्यवसाय थाल्छन्, मुनाफा निकाल्छन् । जोखीमले नै मानिसलाई उद्यमी र नवप्रवर्तक बनाउने हो । सरकारले नाफको ग्यारेण्टी गर्ने हो भने त ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ हुन्छ ।
चाहे स्वदेशी लगानीकर्ता हुन् वा विदेशी, सरकारको श्वेतपत्रको आशय हेर्ने हो भने सरकार टाट पल्टिएको सन्देश लिन्छन् । नेपालमा व्यवसायको उन्नति सरकारको वित्तीय स्वास्थ्यमा निकै भर पर्छ । किनभने, सबैजसो व्यवसायीको अन्तिम ग्राहक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरकार नै हो । सरकारले खर्च बढाउन सक्दैन भने सिमेण्ट, छड, औषधि, होटेलदेखि लिएर मदिरा तथा चाडबाडको पनि व्यवसाय बढ्दैन । प्रधानमन्त्रीले रारामा गरेको सम्बोधनले अन्योल घटाएन झन् बढायो । वास्तविक जानकारी दिएर इमानदार बनेको प्रतिक्रिया दिए पनि समाधानका विषयमा केही पनि नबोली त्यसबाट बच्न खोजिएकाले श्वेतपत्रले अन्योल गराएको हो । त्यसैले सरकारले आगामी नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर पुग्दैन, ऐनकानून नै बनाउनुपर्छ । सरकारले केही न केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने सन्देश त प्रवाह गर्न सकेको छ तर कस्तो ? यसबारे आगामी नीति अस्पष्ट छ । त्यसैले यसमा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ ।